မြန်မာ..သဘောင်္သားနှင့်.. အနာဂတ်..အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း..။ ~ MSU Portal
11/20/2012 06:06:00 PM MYANMAR SEAMEN UNION 1 comment
ပြဿနာ..တစ်ခုကို..စဉ်းစားတဲ့..အခါမှာ..ဇစ်မြစ်ကို.ကျကျနန..စဉ်းစားမယ်..။ ဘက်ပေါင်းစုံက..မြင်မယ်..။ စေတနာထား..သုံးသပ်မယ်..ဆိုရင်တော့..။ ဖြေရှင်းရမဲ့လမ်း..။ပေါ်လာမှာပါ..။ ပေါ်လာယုံနဲ့..မပြီးသေးပါ..ဘူး.အကောင် အထည် ဖော်ရဦးမှာပါ..။ ဝေလေ..လေ..ဆိုပြီး..အော်နေတဲ့..လေနဲ့ချည်းမရပါ..ဘူး..၊ လုပ်
ကိုယ့်ဖာသာမေးပြီး..ကိုယ့်ဖာသာ..ဖြေထားတာလေးတွေ..ကို..ခပ်တည်တည်နဲ့..တင်လိုက်ပါတယ်..။ မနှစ်သက်ရင်..ရီမောလိုက်ပါ..။ အတွေးလေး..တစ်ခု..ရသွားရင်. ကြေနပ်ပါတယ်..။
နောက်တစ်ချက်က..မြန်မာ.သဘောင်္သား..အများစု..ရဲ့..Professional Qualification, English Language, Mind Set, စတာတွေကလည်း.. သဘောင်္ပိုင်ရှင်တွေ ကြိုက်လောက်အောင်..၊ ခေါ်ယူချင်လောက်အောင်.၊ ထင်ထင်မြင်မြင်.. တိုးတက်လာမှုမရှိသေးတာကြောင့်..ပါ..။
အရင်အတိုင်းပါဘဲ..။ လစာများများ..လိုချင်တယ်..၊ အလုပ်သိပ်မကြိုးစားချင်..ဘူး..၊ ဆိုတဲ့သူက.. အများစု..ရှိနေတုန်းပါဘဲ..။
အဲဒီအချက်က..Professional Image ကို..တက်မလာစေပါဘူး..။ ဒီတော့.. Job Opportunity နည်းပါတယ်..။ အလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်ထဲ..မှာ..”မြန်မာတွေ.တော်တယ်.ဆိုပြီး ဖြစ်လာမှ.မြန်မာ.ဆို.ခေါ်မယ်”..ဖြစ်လာမှာပါ..။
နံမည်ကောင်းရဘို့..တည်ဆောက်ယူရပါမယ်..။ အခုက..ကျွန်တော်တို့..အကိုတွေရဲ့..နံမည်အရှိန်နဲ့..ကျွန်တော်. တို့..လုပ်စားနေခဲ့တာပါ..။ အရှိန်..မကုန်ခင်..ပြန်တင်ဘို့..လုပ်ရတော့မဲ့..အချိန်ရောက်နေပါပြီ..။
လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့..ပြောနေရင်..၊ ထင်နေရင်..မှားပါတယ်..။ ဘယ်ဘက်ကပဲ..ထင်ထင်ပါ..။
အလုပ်ရှင်တွေများများ..လာခေါ်မှ..အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း.က..များလာမှာပါ..။ အလုပ်ရှင်တွေ..သဘောကျလောက်တဲ့..အရည်အချင်းတွေရှိလာအောင်..လုပ်ဖို့က.ပြောနေလို့.မရပါဘူး..။ လုပ်ပြရမှာ..ဖြစ်ပါတယ်..။ ကာယကံရှင်တွေ. သဘောင်္သားတွေကိုယ်တိုင်က..မိမိ ရဲ့..Professional Spirit.. မြှင့်ဘို့..တာဝန်ယူစိတ်.၊ တာဝန်သိစိတ်ရှိဘို့..။ ကိုယ်ယူထားတဲ့..ရာထူး..လစာနဲ့..ထိုက်တန်တဲ့.ကျွမ်းကျင်မှု..ပြနိုင်ဘို့..က..ပထမအရေးကြီးဆုံးပါ..။
ဈေးခြင်းတူရင်..သာတဲ့သူကို..သုံးမှာပေါ့..။ လူချင်းတူရင်..ဈေးပေါတာ.ကို...သုံးမှာပေါ့..၊ ဒါက..ကမ္ဘာဦးကထဲက..ရှိခဲ့တဲ့..စီးပွားရေးသီအိုရီဘဲ..။
ကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့..1st Batch က..အလုပ်၊ စိတ်ဓါတ်၊ တာဝန်ယူမှု..မှာ..စံပြလုပ်ပြရင်..နောင်ညီလေးတွေ.. ကိုပါ..အလုပ်ရှင်.ကုမ္ပဏီက..ခေါ်ဘို့..စိတ်ကူးလာမှပေါ့..။
အလုပ်အကိုင်.အခွင့်အလမ်းကို..ဌာနဆိုင်ရာတွေက..တိုက်ရိုက်..မဖန်တီးနိုင်ပေမဲ့..Quality Control ကိုတော့..ဌာနဆိုင် ရာတွေက..လုပ်ရပါ့မယ်..။
Quality ကောင်းတဲ့..နိုင်ငံတစ်ကာအဆင့်..ရေကြောင်းပညာရှင်တွေ..များလာရင် ရေရှည် မှာ..အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းလာမှာပါ..။ ချက်ခြင်းမမြင်နိုင်ပါ..၊ စောင့်ရမှာပါ..။ သစ်ပင်စိုက်သလို..ကြာပါ့မယ်..။
Quality ကောင်းလာဘို့က..ကျောင်းတွေမှာ..သမာရိုးကျ..လမ်းဟောင်း သင်ကြားမှု..ကနေ..ပြောင်းရပါ့မယ်..။ ခေတ်မီတဲ့..စနစ်ကိုပြောင်းရပါမယ်..။ Multimedia တို့..Power Point တို့.. CBT တို့.. Simulator..တို့..။ သုံးရပါမယ်..။
စည်းကမ်းပိုင်းမှာ..တင်းကြပ်ဘို့..လိုပါတယ်..။ စစ်ရေးပြလေ့ကျင့်ရေးကို..နေပူလောင်မှာ..စိုးလို့..အသားမဲမှာ..စိုးလို့..ထီးဆောင်းပြီး..ဘယ်ညာ..နင်းနေတာ..။ ကျောင်းသား..အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး..။ ခွင့်ပြုထားတဲ့..ဆရာ..တွေရဲ့..အပြစ်ပါ..။
နိုင်ငံတိုင်းရဲ့..ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာ..ကောလိပ်..တက္ကသိုလ်တွေ..အားလုံးမှာ.. (ကိုရီးယား..ပူဆန်တက္ကသိုလ်..၊ မလေးရှားက..ALAM.၊ ဥရောပက..ကျောင်းတွေ..) Merchant Navy ကျောင်းသားတွေဟာ..ရှေ့တစ်လက်မ..နောက်ပြောင်..ဗိုလ်ကေနဲ့..ယူနီဖောင်းနဲ့..လေ့ကျင့်ပေးတာပါ..။
နံကထိုင်လေးကို..လျော့လျော့လေးစီး..ကိုရီးယား..F4 မင်းသား..ကေ..လေးနဲ့.. ဘယ်ခြေထောက်က.. ညာခြေထောက်ကို..နွဲ့နွဲ့လေး..ကွေ့ပတ်ရင်း..လမ်းလျှောက်နေတဲ့..ကျောင်းသားတွေကို..မြင်တော့..ရင်ထားမှာ.. မကောင်းဘူး..၊ သူတို့အတွက်ကော..သူတို့..မိဘတွေအတွက်ပါ..ကြားက..စိတ်ပူမိတယ်..။
နောက်တစ်ချက်က..စာသင်ကြားမှုရဲ့..မဏ္ဍိုင်.တစ်ခုဖြစ်တဲ့..Teaching Staff တွေထဲ..မှာ.. လက်တွေ့.အတွေ့အကြုံရှိ.လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိ..ဆရာ.. ခါးဆက်ပြတ်နေပါတယ်..။ ဆရာ..ဆိုတဲ့..အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို..ရွေးချယ်သူ..နည်းလာပါတယ်..။ အထူးသဖြင့်..ကျောင်းဆရာ..တွေ..တစ်ဖြေးဖြေးနည်းလာ..နေပါတယ်..။
မှားယွင်းခဲ့တဲ့..စနစ်ရဲ့..အကျိုးဆက်အနေနဲ့..တစ်ကျပ်ဆရာ..က..ငါးမူး..တပည့်တွေ..မွေးထုတ်..။ ငါးမူး..တပည့်.တွေ...ဆရာဖြစ်လာတော့..။ တမတ်..တန်..တပည့် တွေ..မွေးထုတ်..၊ စတဲ့..ဖြစ်စဉ်က.. မရပ်သေးပါဘူး..။ လည်နေတုန်းပါ..။ ရပ်အောင်ဘာတွေ..လုပ်နေကြပြီလဲ..။ မေးဘို့..လုပ်ဘို့..လိုနေပါတယ်..။
ရှေးစကားပုံရှိပါတယ်.. “ဆရာ့ထက်..တပည့်လက်စောင်းထက်.” .တဲ့..။ တစ်ကျပ်ဆရာ..ရဲ့..တပည့်တွေက..ငါးမတ်..ဖြစ်လာမှ..တိုင်းပြည်တက်လာမှာပါ..။
တိကျ.ရေရာတဲ့..ပေါ်လစီလည်း.မမြင်ရ..သေးပါဘူး.။ အဲဒီတော့..မျှော်တာတောင်.. ဝေးနေ..ပါသေးတယ်..။
Professional Field တွေမှာ..Professional Experienced ရှိတဲ့..ဆရာတွေ..များများလိုပါတယ်..။ အခု..ရေကြောင်း..တက္ကသိုလ်မှာရော..ရေကြောင်းကောလိပ်မှာပါ.. ၁၀% အောက်မှာဘဲ..ရှိပါတယ်..။ ဒါ..ပိုပို..သာသာ..ပြောထားတာပါ..။
ကျောင်းမှာ..ရှိတဲ့..ဆရာ.ဆရာမတွေကို.Sea Time/Sea Service ရအောင်..COC holder တွေဖြစ်အောင်..စီစဉ်မလား..။
ဒါမှမဟုတ်..Sea service ရှိသူတွေကို..ကျောင်းလာချင်အောင်..လုပ်မလား..။ တစ်ခုခုတော့..လုပ်ရမှာပါ..။
ကျွန်တော်တို့.ကို..တစ်ချို့..လူကြီးတွေ..၊ Academic သက်သက်ဘက်က..လာတဲ့..ဆရာတွေ..ဆရာမတွေ..က.. အထင်လွဲတတ်ပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့က..ဒီ.Field မှာ..သိပ်နေရာယူချင်..လွန်းတယ်..လို့..။ သူတို့လည်း..လုပ်ရင်လည်း..ဖြစ်ပါတယ်..တို့..စသဖြင့်ပေါ့..။ မှန်ပါတယ်..လုပ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်..။ မလုပ်ဘဲနဲ့..ပြောနေလို့.က..တော့..မဖြစ်ပါ..။ စာတွေ့..သက်သက်သာရှိတဲ့..ဆရာ..မှာ..အားနည်းချက်..သေချာပေါက်..၂၀၀%လောက်..ရှိပါတယ်..။
ဆရာလူထုစိန်ဝင်းက..ပြောပါတယ်..။ အင်္ဂလိပ်စာသိပ်ကျွမ်းတဲ့..လူတစ်ယောက်..Surgery လက်စွဲကျမ်းကို.ကြည့်ပြီး..ခွဲစိတ်ရင်..လူနာကောင်းလာ..မလားလို့..သေသွား..မလားလို့..မေးဘူးပါတယ်..။ မဖြေပါနဲ့..၊
စာတွေ့..အရေးကြီးသလို..လက်တွေ့..အတွေ့အကြုံလည်း..အရေးကြီးပါတယ်..။ ဘယ်ဟာက..သာတယ်လို့.ငြင်းနေတာ..မဟုတ်ပါဘူး..။ ကောင်းဘို့.လုပ်ဘို့...မြင်တာကို..ပြောတာပါ..။
စာသင်ကြားမှု..ဆောင်ရွက်နေရတဲ့..Work Load ကတော်တော်ကြီးပါတယ်..။ အဲဒါ့အပြင်...ဒီနေ့ခေတ်မှာ.. IMO တို့.. ISO တို့..Auditable ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ..တို့..နဲ့..အတူ..Documentation တွေ..ကပ်ပါလာပါတယ်..။
တကယ်လုပ်နေရတဲ့..သူတွေရဲ့..အနေအထားကို. တာဝန်ရှိသူ.များက.. သဘောမပေါက်ကြ တာ.. မကူညီကြ.တာကလည်း.. အခက်အခဲ.တစ်ခုပါ.။ Teaching Staff သာလိုတာမဟုတ်ပါ..ဘူး.. သူတို့ကို.. ကူမဲ့..Staff တွေ.ပါ..လိုအပ်ပါတယ်..။
နောက်..အခက်အခဲတွေက..ဘတ်ဂျက်..Teaching Aids, Library, Reference books.၊ နိုင်ငံခြားငွေ..သုံးစွဲခွင့်..စတာ..တွေပါ.ပါတယ်...။
မေး..။ Local Representative ဌာနေကိုယ်စားလှယ်တွေက..ရော..လုပ်ပေးလို့..မရဘူးလား..။
ဖြေ..။ ရှင်းရှင်းပဲ..ပြောပါ့မယ်..မရပါ.ဘူး..။ ရတယ်ထင်ရင်..လုံးဝ..မှားပါတယ်..။
ဥပမာပေးရရင်…စာရေးက..သူဌေးကို..ခိုင်းလို့..မရပါ.။ လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့..လိုအပ်ချက်ကို..ဌာနေကိုယ်စားလှယ်က..ဖြည့်ဆည်း..ဆောင်ရွက်ပေးရသူပါ..။ သူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်က..အရမ်းနည်းပါတယ်..။ တစ်ချို့ဆို..နိုင်ငံခြား.သဘောင်္ကုမ္ပဏီရဲ့..Crew Manager ကို..ဆရာတင်.ထားရတဲ့..အနေအထားပါ..။ သူ့ လိုင်းက..လူခေါ်ရင်.သုံးရင်..၊ သဘောင်္သား…ဆီ က..သူတောင်းလို့..ရမဲ့.မုန့်ဘိုး.ထဲက၊ ဘယ်ရွေ့..ဘယ်မျှ..ပူဇော်ပသပါ့မယ်လို့..အောက်လေ.လေး နဲ့.. ကျို့ထားရပါတယ်..။
မေး..။ သဘောင်္သားတွေ..အလုပ်အကိုင်ရတာ..နည်းတာ..DMA က..စာမေးပွဲတွေကြောင့်၊ စာမေးပွဲတွေ..
တစ်နေ့ကဘဲ..ကျွန်တော့် သင်တန်းကျောင်းလေးကို..လာလည်တဲ့..သဘောင်္လောကထဲက.. မိတ်ဆွေ.. တစ်ချို့နဲ့..ပြောဖြစ်ပါတယ်..။ သူက..အပေါ်က..လေ..အတိုင်းပြောလာလို့ပါ..။
ကျွန်တော်..Examiner လုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်..။ ရံဖန်ရံခါမှာ..လူအင်အားလိုတဲ့..အခါမှာ..External Examiner အနေနဲ့..သွားကူပါတယ်..။ ရေကြောင်းကောလိပ်မှာလည်း...ဆရာ.Visiting Lecturer.လုပ်ပါတယ်..။ လုပ်ဆဲပါ..။ အပျော်..၀င်..လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး..။ တကယ်လုပ်နေတာပါ..။
စာသင်သူ..လုပ်ပါတယ်..။ စာစစ်သူလုပ်ပါတယ်..။ ကိုယ်တိုင်လည်း..ကျောင်းသား..လုပ်ခဲ့ပါတယ်..။ ကျောင်းသားများနဲ့လည်း.ယနေ့...ထိတွေ့နေ ပါတယ်..။ ဆိုလိုတာက..အကြားတွေကို..ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး..။ ထိတွေ့မြင်သိတာတွေကို..ပြောပါ့မယ်..။
အနိုင်ရဘို့..ငြင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့..။ ကျွန်တော်..ငြင်းဘို့..အချိန်မပေးနိုင်ပါ.ဘူး..။ ပြဿနာ..ကိုအဖြေရှာတာ..ဆိုရင်တော့..ပြောချင်ပါတယ်..။ ဆိုတော့..သူက..လက်ခံပါတယ်..။ ကျွန်တော်သူ့ကို..မေးခွန်းလေးတွေ..အရင်မေးပါတယ်..။
(၁) အရင်က..ဆယ်တန်းမှာ..၁၅% အောင်တယ်..အခု..၅၀% အောင်တယ်..။
(၂) MOT Exam အင်ဂျင်နီယာဘက်မှာ..အရင်က..အောင်ချက် ၅% ကနေ..၁၅% ရှိတယ်..။ ယနေ့..3E
(၄) အောင်ချက်% တိုးတာနဲ့..အလုပ်ခန့်ထားမှု..များလာမယ်လို့..ဘယ်သူက..ဘာကြည့်ပြီး..ပြောတာလဲ..။
ယနေ့ခေတ်..လူငယ်တွေက..IQ မြင့်ပါတယ်..။ Calculation ကောင်းပါတယ်..။ အရင်လူတွေက..Sea time ပြည့်နေတာတောင်..နေဦး..ငါ့အတွေအကြုံက..လိုသေးတယ်..ဆိုပြီး..သင်္ဘောထပ်လိုက်ပါသေးတယ်..။ အခုက..လက်ပတ်နာရီကြည့်ပြီး..သဘောင်္လိုက်တာပါ..။ အချိန်စေ့ပြီ..။ဒေါင်..ဆိုတာနဲ့..ဆင်းလာတာပါ..။စာမေးပွဲဖြေဘို့..လုပ်တော့တာပါ..။
Certificate is Money လို့..မြင်ထားသူတွေ..အများကြီးရှိနေတာပါ..။
Life Boat ထဲမှာ..ရှိတဲ့..ပစ္စည်းတွေကို.. (အမည်နဲ့ပစ္စည်းတွဲပြီး) မသိတဲ့.. Second Mate ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်..။
Air Compressor ကို..Generator Engine လို့..ပြောတဲ့..3E ရှိနေပါတယ်..။ အားလုံးကို.ပြောတာ..မဟုတ်ပါ.။
ကိုယ့် Professional ကိုတန်ဘိုးမထားဘဲ.. ငွေရလွယ်တဲ့..အလုပ်အဖြစ်..ပေါ့ပေါ့တန်တန်..သဘောထားတဲ့.. လူငယ်တွေ..ရှိလာနေတာကို..၀န်ခံ ကြ..ရမှာပါ..။
တနေ၀င်ရင်..တရာ ၀င်ပြီ. ..(ဒေါ်လာတစ်ရာ).ဆိုပြီး..အလုပ်ကို..အချိန်ဆွဲ..လုပ်တဲ့..ပြီးစလွယ်..လုပ်တဲ့.. ၊ လေ့လာဆည်းပူးမှု..မရှိတဲ့..၊ မင်းအဆင့်နဲ့..ဒါလေးကို..မလုပ်တတ်ဘူးလားလို့..မေးတဲ့အခါ.. မခံချင်စိတ်မမွေးဘဲ..၊ ခံချင်စိတ်ဘဲ..မွေးထား..တဲ့..အရာရှိငယ်တွေ.. အင်ဂျင်နီယာငယ်တွေ.. ရှိနေတယ်လို့..ပြောရင်.၊ ဘယ်သူငြင်းနိုင်မလဲ..၊ ဒီလူတွေဟာ..မိမိ Professional Image ကို.မြှင့်တင် နေသူတွေလား..၊ ထိခိုက်အောင်..လုပ်နေသူတွေလား..၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတိုးအောင်လုပ်နေတာလား..လျော့အောင်လုပ်နေတာလား..။
2E စာမေးပွဲဖြေသူဟာ..3E အောင်ပြီး..အင်ဂျင်နီယာအနေနဲ့..sea service ရှိပြီးသားသူပါ..။ စာမေးပွဲမှာ..မေးတဲ့..GEK, General Engineering Knowledge တို့.၊ MEK, Marine Engineering Knowledge ဆိုတာက..တံတားဆောက်တာ..၊ ၀ါးဂွမ်းစက်ရုံအကြောင်းမေးတာ..မဟုတ်ပါဘူး..။ သဘောင်္ပေါ်မှာရှိတဲ့..အသုံးပြုခဲ့တဲ့..မောင်းခဲ့တဲ့..စက်ယန္တရား..နဲ့..စနစ်တွေကို..မေးတာပါ..။
ရေးဖြေမှာ.၊အဖြေလွှာပေါ်မှာ.ပုစ္ဆာနံပါတ်..1.2.3. နံပါတ်တော့..ရေးသွားတယ်..။ A.b.c. စာတစ်လုံးမှ..မရေးသွားပါဘူး..။စာရွက်အလွတ်..တွေချည်းဘဲ..အပ်သွားတဲ့..ပုဂ္ဂိုလ်တွေ..ရှိလာပါတယ်..။
တစ်ပွဲတိုး..စပေါ့ရိုက်ကျက်မယ်..။ တိုးရင်..အောင်မယ်..။ မတိုးတော့လည်း..ဘာဖြစ်လဲ..ဆိုတဲ့.. သဘော ကို..အဲဒီမှာ..တွေ့နိုင်သလို..။ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးအနေနဲ့..သဘောင်္ ပေါ်မှာ..ဘာမှ..မလုပ်ခဲ့ဘူး..နေသာသလို.. နေခဲ့ တယ်..ဆိုတာကို..လှစ်ပြလိုက်တာပါ..။
Professional Pride ဆိုတာ..ဂျိုနဲ့လား..ဆိုတဲ့သူမျိုးတွေပါ..။
ကျွန်တော်တို့..စာမေးပွဲတွေမှာ..Penalty System ရှိပါတယ်..။ ဖြေဆိုမှု..ညံ့လွန်းရင်..စာမေးပွဲ..ဖြေဆိုခွင့်..တစ်ကြိမ်ရပ်ဆိုင်းတယ်..။ နောက်တစ်ခေါက်ကျော်မှ..ဖြေပါ..။
Sea Service ပြန်ယူပြီးမှ..ဖြေပါ..ဆိုတာမျိုးကို..Resault Sheet မှာ..ရေးပေးပါတယ်..။ ကျောင်းသားတွေက..တော့..ပိန္နဲသီးကျွေးခံရတယ်..လို့ခေါ်ပါတယ်..။
Teaching ပိုင်းကို..မြှင့်ရမယ်..။ ပန့်ပိုးရမယ်..။ Teaching ပိုင်းနဲ့..Exam ပိုင်းမှာ.နားလည်မှု..ကူညီရိုင်းပင်းမှု ရှိရမယ်..။ အပြန်အလှန်..အချက်အလက်ဖလှယ်ရမယ်..။ ကျောင်းသားက..ကျွဲနှစ်ကောင်ခတ်တဲ့ကြားက..မြေဇာပင်မဖြစ်သင့်ဘူး..။ ကျောင်းသားကလည်း..စာမကျက်..အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့..မြေဇာပင်လေးတွေကို..သနားကြပါလို့..ထ.ထ..အော်နေလို့မရဘူး..။ လုပ်သင့်တာ..လုပ်ရပါ့မယ်..။ (အခုလက်ရှိမှာ..စာသင်တဲ့..ကျောင်းနဲ့..စာစစ်တဲ့..ရုံးကြားက..ဆက်ဆံရေး..ကောင်းပါတယ်..။)
သားသား..စာမေးပွဲဖြေမယ်..၊ သားသားကို..မေးခွန်းပေး..ဆိုတာမျိုး..မလုပ်သင့်တော့..ပါ..ဘူး..။ မုန့်ခွံကျွေးတာ..စောင့်နေတဲ့.သူက...ဘယ်က..လာ..ပညာရှင်ဖြစ်ပါ့မလဲ..။
စာနားမလည်ရင်မေးသင့်တယ်..။ Dictionary ကြည့်ရာမှာ..ပျင်းလို့..ဆရာကို..မေးတာတော့.. မေးသင့်..မမေးသင့်..ကိုယ့်ဘာသာ..စဉ်းစားဘို့ကောင်းနေပါ..ပြီ..။
၆လက်မလောက်..အမြင့်ရှိတဲ့..တန်းဆိုလို့..ကတော့..လူတော်တော်များများက..တင်ပါးလေး..လိန်ကျစ်..လိန် ကျစ်.တွန့်လျှောက်ပြီး.ဂန်ဒူး.ကျော်နည်းလေးနဲ့.ကျော်သွားမှာပါ..။ တစ်ဘက်ကျော်သွားပေမဲ့..လမ်းလျှောက်ရင်း ခဲနဲ့..ခလုပ်တိုက်မိရင်..သွပ်ပြား.ကို..ခဲကြီးက..လာတိုက်တယ်..အဟင့်..အဟင့်..နဲ့..ငိုမှာပါ..။
တိုင်စာကို..အရေးယူသင့်ပေမဲ့..ပစ်စာတွေ..ကိုတော့..လစ်လျှူရှုသင့်ပါတယ်..။ အခြေအနေမှန်ကို..တာဝန်ရှိသူများက..သိသင့်ပါတယ်..။ သိအောင်လည်း..လုပ်ရမှာပါ..။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ..၀န်ထမ်းတွေဟာ..တစ်ကယ်..လုပ်ရမဲ့.လုပ်သင့်တဲ့.အလုပ်တွေကို..ပစ်ပြီး.၊ ပစ်စာကို..ရှင်းနေရတာတွေ.. ရှိပါတယ်..။
မေး..။ စာမေးပွဲတွေကို..(၂)လ..တစ်ခါ..(၃) လ..တစ်ခါ..လုပ်သင့်တယ်လို့..မြင်ပါသလား..။
ဖြေ..။ မြင်ပါတယ်..ဗျာ..။ ဖြစ်နိုင်ရင်..တစ်လ.တစ်ခါ..လုပ်သင့်ပါတယ်.။ ဒါမှ..ကျသွားတဲ့..ကလေးတွေ..မြန်မြန်..ပြန်ဖြေနိုင်..မယ်..။ ကမ်းနားမှာ..စောင့်ရမဲ့..ကာလတွေ..နည်းမယ်..။ ကုန်ကျစားရိတ်တွေ..မထောင်းတော့ဘူးပေါ့..။
ဒါပေမဲ့..အဲဒါက..Examiner တွေလုပ်လို့..မရဘူး..။ နိုင်ငံတော်က..လုပ်ပေးရမှာ..။
ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့...Engine Dept: ဘက်မှာ..ဟိုး..အရင်က..CE exam ဖြေသူ..(၁၅) 2E exam ဖြေသူ (၂၅) 3E exam ဖြေသူ (၅၀)..လောက်ရှိပေမဲ့..။
ဒီနေ့ခေတ်တွေမှာ..CE exam ဖြေသူ (၅၀) , 2E exam (၁၂၀) 3E exam (၃၀၀)..ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတော့..။ ရေးဖြေစစ်ရတာ..နှုတ်ဖြေစစ်ရတာမှာ..အချိန်တွေ..အလုပ်တွေ..အဆများစွာပိုလာပါတယ်..။ အတိုင်းအတော..တွေရှိတဲ့..အတွက်..Answer Paper ကို..နောက်တစ်ဖွဲ့က..Counter Check ထပ်စစ် ရ ပါတယ်..။ အလုပ်..အဆင့်တွေလည်း..ပိုလာပါတယ်..။ ဒီတော့..လက်တွေ့မှာ.ပိုကြာလာပါတယ်..။
Deck Dept ဘက်မှာ..ပိုဆိုးတယ်.လို့..ကြားပါတယ်.။
(၁) Examiner အရေအတွက်..တိုးမလာသေးပါဘူး..၊ အရင်..နှစ်(၂၀)လောက်က..အတိုင်းပါဘဲ..။
(၂) Examiner တွေဟာ..တစ်ခြား..ရုံး..အလုပ်တွေ..ရှိပါသေးတယ်..။စာမေးပွဲ..တစ်ခုထည်း..လုပ်ရတာ
ဒီတော့..ကြာနေဦးမှာပါ..။ Examiner လူအင်အားတိုးရင်…ရမယ်ဆိုပေမဲ့.. ဘယ်လိုလူတွေ..တိုးမှာလည်း..တကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်မဲ့သူတွေ..ရနိုင်မှာလား..။ လာမဲ့သူ..ရှိလား..။ ရှိသူက..Qualified ဖြစ်ရဲ့.လား..။ ကြယ်ငါးပွင့်ကလည်း..နိုင်ငံပိုင်ဌာန..မဟုတ်တော့တဲ့..အတွက်..DMA ရဲ့..ပညာရှင် Resources ကို..ဘယ်က..ပြောင်းယူကြမှာလဲ..။ စဉ်းစားကြရမဲ့..အချက်ပါ..။ မေ့ထားလို့..မရပါ..။ ပြင်ပသဘောင်္လိုင်း..က..ရေကြောင်းပညာရှင်တွေကို..၀န်ထမ်းရွေးချယ်ရေး (PSC) ကနေ..ခေါ်မှာလား..။ တစ်ချိန်မှာ..ကြုံရမဲ့..ပြဿနာအကြီးကြီး..တစ်ခုပါ..။ နောက်မကျခင်..စဉ်းစားသင့်.ပါတယ်..။
မေး..။ အောင်ချက်မြင့်မားလာဘို့..၊ ရေကြောင်းလောကမှာ..ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ..ပေါ်ထွန်းလာဘို့.. ဘယ်လို..လုပ်ရမယ်..ဆိုတာ..ပြောပြပေးပါ..လား..။
တချိန်ထည်းမှာဘဲ..အဆင့်မြင့်ပညာရေး..လည်း..လိုက်ပြင်နေရပါမယ်..။ တော်ရိ..ရော်ရိ..တူးထား.. စီထားတဲ့..မဆလာမပါတဲ့..အုတ်မြစ်ပေါ်မှာ..တိုက်အမြင့်ကြီး..ဆောက်လို့..မရပါဘူး..။
ကျွန်တော်တို့..ဆရာများကလည်း..Well Prepared လုပ်ထားတဲ့..Lesson Plan နဲ့..Lecture Notes နဲ့..စာသင်သင့်ပါတယ်..။ အတွေ့အကြုံတွေ..လျှောက်ပြောနေလို့..မရတော့ပါဘူး..။
တိုင်းပြည်..တို့..၊ ကိုယ့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း..တို့..၊ တာဝန်ဝတ္တရားတို့..ဆိုတာဟာ..ချစ်ရမဲ့..တန်ဘိုးထားရမဲ့..အရာတွေ..ပါ..။
အသွင်..ပြောင်းဘို့..၊ အနှစ်သာရ..ပြောင်းဘို့..က..၊ တော်တော်လေး..လုပ်ကြရဦးမှာပါ..။
ဖြေ..။ ထိပ်တန်းလို့..မပြောလိုပါဘူး..။ ခပ်ညံ့ညံ့..မဟုတ်ဘူး..ဆိုတာတော့..ပြောချင်ပါတယ်..။
ဖိလစ်ပိုင်မှာ..Mariners တွေက..နိုင်ငံကို..ပြန်ပို့တဲ့..Hard Currency က..တစ်နှစ်ကို.. ဒေါ်လာသန်းလေးထောင် ကျော်ပါတယ်..။ အခု..ဆို..တွေးကြည့်..နိုင်ပါတယ်..။
Natural Resources is limited, Human resources is unlimited တဲ့..။ ကျောက်မျက်ရတနာ..ရောင်းတာ..၊ကျွန်းသစ်ရောင်းတာ..ထက်..ရေရှည်မှာ..နိုင်ငံကို..အကျိုးပြုမဲ့..လုပ်ငန်းပါ..။
ဖြေ..။ ဟုတ်ကဲ့..၊ ဖြေချင်ပါတယ်..။
ဒါပေမဲ့..မိန်းမချက်တဲ့..ထမင်းလေး..စားချင်လို့.. ဒီမှာဘဲ..ရပ်လိုက်ပါတော့မယ်.။ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ.နော်..။
နောက်ပြီးဆရာထုတ်ထားတဲ. electrical စာအုပ်အတွက်
from mmu student (3/e)